Thar Htwe Zan အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Thar Htwe Zan အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
Thar Htwe Zan အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၀၃:၁၈ ၀၃:၁၈၊ ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ရန်ကုန်အလွန် (ရုပ်ရှင်) ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၆:၂၀ ၀၆:၂၀၊ ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဘာကွာလို့လဲဗျာ (ရုပ်ရှင်) ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၂၁ ၀၀:၂၁၊ ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈‎ ပေါလ်ဝေါ်ကာ ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၆:၀၇ ၀၆:၀၇၊ ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဟယ်ရီဆန် ဖို့ဒ် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၃:၅၆ ၀၃:၅၆၊ ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ ဖာရာ ဖော့ဆက် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၄၇ ၀၀:၄၇၊ ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ ဂျနီဖာ လိုပက်ဇ် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၂၀ ၀၀:၂၀၊ ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀‎ ကေတီ ပယ်ရီ ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၅:၄၉ ၀၅:၄၉၊ ၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၈‎ ဆယ်လီနာ ဂိုမက် ‎ →‎အနုပညာရှင် ဘဝ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၄:၄၂ ၀၄:၄၂၊ ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄‎ အဲလစ်ဆန် ခရောက်စ် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၄:၃၅ ၀၄:၃၅၊ ၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ ရှနိုင်းယား ထွိန်း ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၁၂:၂၇ ၁၂:၂၇၊ ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ Dr. Dre ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၄:၃၀ ၀၄:၃၀၊ ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆‎ မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် ‎ →‎ငယ်ဘဝ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၄:၀၈ ၀၄:၀၈၊ ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆‎ D.O. (အဆိုတော်) ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၄:၃၃ ၀၄:၃၃၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၂‎ ဆူဟို ‎ →‎အလုပ်အကိုင်: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၈:၂၄ ၀၈:၂၄၊ ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ အီဂျောင်းရှင်း ‎ →‎စစ်မှုထမ်း: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၂:၅၅ ၀၂:၅၅၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ ကန်နီ ရော်ဂျာ ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၁၃ ၀၀:၁၃၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ မရိုင်းယား ကဲရီ ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၁၂ ၀၀:၁၂၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ စတီးဗန် တိုင်လာ ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၂၅ ၀၀:၂၅၊ ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇‎ စတီးဗန် တိုင်လာ ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၇ ၀၀:၀၇၊ ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဘရူနို မားစ် ‎ →‎အောင်မြင်မှု: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၆ ၀၀:၀၆၊ ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ဘရူနို မားစ် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၆ ၀၀:၀၆၊ ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဘရူနို မားစ် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၁:၂၄ ၀၁:၂၄၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် ‎ →‎ဘဝနိဂုံး: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၇:၂၈ ၀၇:၂၈၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ယိုဟန် ပက်ချယ်ဘဲလ် ‎ →‎သီချင်းများ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၇:၂၆ ၀၇:၂၆၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ချားလ်စ် သီအိုဒို ပက်ချယ်ဘဲလ် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၇:၂၅ ၀၇:၂၅၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ဝီလ်ဟမ် ဟီရွန်နမုစ် ပက်ချယ်ဘဲလ် ‎ →‎သီချင်းများ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၇:၂၄ ၀၇:၂၄၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဝီလ်ဟမ် ဟီရွန်နမုစ် ပက်ချယ်ဘဲလ် ‎ →‎ကိုယ်ရေးအကျဉ်း: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၅:၂၇ ၀၅:၂၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ကိ ဒေးဖတ် နျူဟွမ် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၅:၂၅ ၀၅:၂၅၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၀‎ ချလိတ်မပုန် မာလာခန်း ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၃၃ ၀၀:၃၃၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ချလိတ်မပုန် မာလာခန်း ‎ →‎အလုပ်ရှာဖွေရေး: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၁ ၀၀:၀၁၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ ဂျင်တရာ ဖွန်လပ် ‎ →‎အလုပ်ရှာဖွေရေး: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၂:၄၇ ၀၂:၄၇၊ ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ တိုက် ဒော်ရာထိုက် ‎ →‎အလုပ်ရှာဖွေရေး: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၂:၅၇ ၀၂:၅၇၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ ဖိုင်ဖွန်ဆထောင် ‎ →‎အလုပ်ရှာဖွေရေး: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၂:၅၆ ၀၂:၅၆၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၆‎ ဖိုင်ဖွန်ဆထောင် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၃:၀၀ ၀၃:၀၀၊ ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၁‎ ဖုန်စာက စိုးငစဲင ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၃၉ ၀၀:၃၉၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ မိုက်ဖီရိုဖွန် ‎ →‎အလုပ်ရှာဖွေရေး: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၃၆ ၀၀:၃၆၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၄‎ မိုက်ဖီရိုဖွန် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၃၅ ၀၀:၃၅၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ မိုင်ထိုင်း ဟွာကျိုက်စင် ‎ →‎အလုပ်ရှာဖွေရေး: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၁၁ ၀၀:၁၁၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၈‎ သုရပောန သောမ္ဗတဆာရေန ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၆:၅၈ ၀၆:၅၈၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၉‎ ရှူးဂါး ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၅ ၀၀:၀၅၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉‎ D.O. (အဆိုတော်) ‎ →‎သက်မွေးမှုလုပ်ငန်း: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၂:၅၀ ၀၂:၅၀၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၅‎ ဆင်မြူရယ် ဂင် ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၁၀ ၀၀:၁၀၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉‎ ဆူဟို ‎ →‎အလုပ်အကိုင်: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၉ ၀၀:၀၉၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁‎ ဆူဟို ‎ →‎အလုပ်အကိုင်: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၄ ၀၀:၀၄၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၆‎ ဆူဟို ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၀၃ ၀၀:၀၃၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ ဆူဟို ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၀:၄၃ ၀၀:၄၃၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၆‎ ရိန်း ‎ →‎top: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၂၃:၅၀ ၂၃:၅၀၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဟွန်ဘင်း ‎ →‎ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၀၆:၅၈ ၀၆:၅၈၊ ၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ အီဂျောင်းရှင်း ‎ →‎ပရဟိတ: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
၂၃:၅၉ ၂၃:၅၉၊ ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ ဂျေဂျေလင်း ‎ →‎အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း: စာလုံးပေါင်း ပြင်ခဲ့သည် လက်ရှိ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ်
Thar Htwe Zan: စာမျက်နှာခွဲများ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Thar_Htwe_Zan" မှ ရယူရန်